Córdoba - Chọpụta ebe kachasị mma na ebe ngosi | Njem zuru oke
Córdoba bụ obodo na mpaghara Andalusia na Spain. Ọ dị n'akụkụ ụkwụ nke Sierra Morena ma bụrụ obodo nke atọ nke ndị bi na Andalusia. E hiwere ya na narị afọ nke abụọ BC ma nwee ọtụtụ akụkụ na-achịkọta akụkọ ya niile n'ụzọ zuru oke. Otu n'ime nkwụsị karịa nkwụsị karịa na Masjidul Katidral ya. Ebe ụdị dị iche iche dịka Mudejar, Gothic ma ọ bụ Renaissance jikọrọ ọnụ.
Nzọụkwụ ọzọ anyị ga-aga na saịtị ihe ochie nke Medina Azahara, nke dị naanị ihe dị ka kilomita 8 site na obodo ahụ. Alcázar de los Reyes Católicos bụ ebe e wusiri ike nke mara mma dị ukwuu, dịkwa ka mpaghara nke ogige ahụ dị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọmarịcha onyonyo, echefula ije ije site na akwa mmiri ya.
N'otu aka ahụ, mpaghara ọzọ kachasị iche bụ La Plaza de la Corredera. Imirikiti ụlọ mmanya na ụlọ nri na-etinye uche ebe ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na anyị kpọtụrụ aha n'ubi, mgbe ahụ oghere Capuchin adịghị anya na azụ Kraịst nke Lanterns. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ gburugburu nke okporo ụzọ ndị dị warara, mgbe ahụ ị ga-aga ileta ebe ndị Juu na n'ime ya, Calleja de las Flores. Nzọụkwụ site na Mgbidi ahụ, Torre de Calahorra ma ọ bụ Palacio de Viana bụ isi ihe ndị ọzọ dị na Córdoba.
Njem na-enyere aka ikuku oxygenate ọ bụla. Ikwupu ma chọpụta ebe ọhụụ maka ịdị mfe ịnweta ...
por Cordoba zuru oke eme 4 afọ .